Rapeto - Takila Malagasy
Rapeto (Boky Isambilo)
Mpanoratra: Boky Isambilo
Nitsidika : 1898
Angano fitantara ho an'ny ankizy
Efa latsaka ny alina. Eo am-piandrasana ny vary ho masaka, indreo mirondrona eo am-pitoerana mila ho resin-tory ny ankizy botretra isany, ka tapa-kevitra i nenibe fa hanao angano. Vory manodidina azy ny ankizy rehetra.
"Fahiny, hono, rankizy, nisy lehilahy lava dia lava natao hoe Rapeto. Raha mandeha, hono, izy, ny tongony havia mbola eny Ambohidrapeto ary ny havanana efa tonga tany Ambohitrarahaba. Ireny vato loaka hitanareo eny amin'ny làlana ireny, izay mitovitovy amin'ny dian-tongotr'olona, dia dian-tongo-dRapeto avokoa.
Nanambady vehivavy vazimba natao hoe Rasoalao, izay nonina tao amin'ny faritanin'i Miarinarivo, hono, izy. Renirano kely madinika no hita ombieny ombieny tamin'io faritany io ka sahirana ery Rasoalao nampisotro rano ny ombiny fa niompy omby be dia be izy. Dia nanaovan-dRapeto fampisotroan-dranon'omby, hono, Rasoalao. Notaomin'izy irery, hono, ny vato teny manodidina rehetra teny ka nanampenany ireo renirano kely ireo ary dia nahavita dobo lehibe makadiry izy, dia ny farihin'Itasy ankehitriny izany. Tao no nisotro rano ny ombin-dRasoalao vadiny.
Nanan-janaka lahitokana izay tiany dia tiany tokoa, hono, Rapeto. Indray andro, nangataka azy ny zanany haka ny volana hataony kilalao, ka dia lasa Rapeto naka ny volana."
Tsy naharitra Isambilo tamin'izay ka nanao hoe :
- Hay ve, ry nenibe, efa nisy tonga teny amin'ny volana izany ny Malagasy ? Ny mponina amin'ny tany sasany anefa izao vao miolomay mifaninana ho eny !
- Eny anaka, hoy i renibeny, efa tonga teny amin'ny volana tokoa Rapeto, saingy tsy mbola tafaverina izy mandraka androany hilaza izay eny.
- Angamba variana mitendry valina kosa izy eny ko ! Tsy hitan'i nenibe tokoa angaha izy amin'ilay diavolana iny miangaly mitendry valiha ?